Fanampiana an-tariby avy amin'ny Semalt Ahoana ny fampiasana ny Google Analytics
Google dia manome fomba malalaka sy mora handrefesana ny fahombiazan'ny tranonkala iray sy hanatsarana ireo zavatra tsy mahomby. Amin'ny alàlan'ny Google Analytics, ireo tompon-tranonkala dia afaka miatrika ireo mpitsidika ankehitriny, ny asany raha eo amin'ny tranokala, ny habetsahan'ny fotoana honenany amin'ny votoatiny, ny fampidinana ny teny fikarohana, ary ireo lafiny manan-danja hafa izay mahakasika ny tranonkala. Igor Gamanenko, Semalt Mpitarika Success Success, dia manolotra hevi-dehibe momba ny fampianarana ho an'ny mpampianatra amin'ny fomba sasany hampiasana Google Analytics hanatsarana ny fahombiazan'ny tranonkala.
Fampandehanana ny Google Analytics
Ny lesona dia misy dingana arahina amin'ny fomba ahafahana mametraka ny code tracking amin'ny Google Analytics, ary ny fomba hiasana ny angona angon-drakitra - sava naastrehvid. Miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, ny mpampiasa dia mahazo fahatakarana momba ny fitsidihan'izy ireo, ary mahazo fampahalalana hafa toy ny pejin-tranonkala, pejy isaky ny fitsidihana, ny faharetan'ny fotoana laniana handefa ny sanda fampidirana, sns. Ny fampahalalana toy izany dia tena zava-dehibe ho an'ny olona rehetra miasa Google Analytics (10 taona).
Tutorial Google Analytics: Tanjona amin'ny tanjaky ny tanjona
Rehefa mamorona na mamorona tranonkala vaovao ny tompony, matetika dia mametraka tanjona sasantsasany hanatratrarana ny famokarana. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanaraha-maso ny tanjona satria mamela ny tompony hahafantatra ny halehiben'izy ireo amin'ny fanatanterahany ny tanjony na ny halavirany. Ny zava-dehibe iray hafa mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny tanjona dia ny hahafantarana ny toerana izay nahatonga ireo mpampiasa nanampy nanatratra ireo tanjona ireo, izay manampy amin'ny fampivoarana paikady ho avy..Ao amin'ny lesona, misy fehezanteny sasany toy ny lalao marina, ny lalao, ary ny lalao mifampiankina, izay tokony hianaran'ireo mpampiasa vaovao mba hanamafisana ny fahaiza-manaony amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny tranonkala.
Fampandrenesana Google Analytics: Fanaraha-maso ny hetsika
Ny Google Analytics dia manampy ireo tompona tranonkala hahazoana tombontsoa avy amin'ireo dingana natao ao amin'ny tranokalany. Na izany ny fametahana lisitra an-tserasera na tsindrio ny bokotra iray hijerena ny media sasany, dia ireo hetsika nataon'ireo mpitsidika no tena zava-dehibe ho an'ny fahombiazan'ilay tranonkala. Ny fomba nanambaràn'ny hetsika ny tompony raha toa ka sarobidy ny gazetiboky omen'izy ireo na tsia. Ampahafantariny ihany koa hoe iza amin'ireo mpampiasa votoaty no mahita zavatra mifanintona kokoa noho ny iray hafa. Ny tompona orinasa dia afaka mahafantatra tsara ny fomba ifantohana kokoa ny mpanjifa raha toa ka manara-maso ny hetsika ataony izy ireo
Fanarahana ny rohy mankany amin'ny Google Analytics
Ny rohy nivoaka avy any ivelany dia tena voajanahary ho an'ny tranonkala. Tsy azo atao ny mipetraka irery ao anaty tranokala tokana. Ny tranonkala dia tsy afaka ny ho ny nosy raha ilainy ny loharanom-bola hahazoana fanekena na hananganana ny fifamoivoizana. Ny tranonkala, noho izany, dia mila ny vohikalany mpiara-miombon'antoka na loharano hafa izay ahafahan'izy ireo mahazo ny vaovao ilaina mba hahazoana ny fahamendrehana. Ny fananana rohy mandroso dia mahatonga ny tranonkala ho mendri-piderana kokoa, am-pitiavana, ary ny ankamaroany, azo itokisana.
Fanaraha-maso Hafatra mifandray amin'ny Google Analytics
Azo atao ny manangana tranonkala iray ho an'ny mpihaino kinendry. Na izany aza, inona no mety hojeren'ny olona ny fomba fanaraha-maso ny lanjan'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa amin'ny fotoana. Manampy amin'ny fametrahana ny tanjon'ny tranonkala tsirairay ny torolàlana, izay manampy amin'ny famaritana ny habetsaky ny votoatin'ny tranokalan'ny mpitsidika.